Sarobabay, izay voa aza tezitra | NewsMada
Sarobabay, izay voa aza tezitra
Mandeha eo aloha, hono, ny tena, ahiahin’ny olona; mandeha ao aoriana, miahiahy olona. Aleo miara-dalana? Amin’izay, mifampitantana na mifanohantohan-tsy ho lavo. Nefa tsy izay no misy amin’izao, raha ny teny sy ny ataon’ny mpitondra: hafa ny lazain’ny vava, hafa ny ataon’ny tanana sy izay diavin’ny tongotra.
Na mampanao ny hafa izay tsy atombony amin’ny teny izy, na manao amin’ny hafa izay tsy tiany hatao amin’ny tenany. Ahoana? Takiny ny fiovan-toe-tsaina, nefa ny tena tsy te hiova na tsy vonon-kiova. Manomboka eo amin’ny fiteny sy ny fihetsika io. Tsy zaka, ohatra, ny tsikera. Nefa ny filazana izany, efa fitsikerana ny hafa.
Mila atomboka amin’ny tena sy ny manodidina ny tena izay lazaina, raha te ho to teny: inoan-teny amin’izay lazaina, mahatanteraka izay tenenina. Na atao izay lazaina, ary lazaina izay atao. Tsy izay mahay miteny tsinona no hoe hendry sy mandroso, fa izay mahay mihaino, indrindra miaina sy manatanterka.
Tsy henoana sy inoan-teny intsony izay miteny lava, raha tsy hoe natao hiteny fa tsy hiasa. Natao hitsikera izay tsy mety ataon’ny mpitondra izay ivelan’ny fitondrana; ny mpitondra, natao hiasa ary hahazaka tsikera: mihaino ny hafa na izay heverina ho kely sy malemy na vitsy aza, manitsy ny tsy mety…
Rehefa tsy miasa ny tena: tsy maintsy tenenina, na tsy maintsy misy miteny. Tsy misy ny te hanan-dratsy. Ny hevitra tsy azo tsy amin’olombelona. Miloloha lanitra ka mety ho lena, mandia tany ka mety ho solafaka. Tsy mety ny hoe lehibe tsy meloka na tsy mba diso. Na tsy misy mahavita toy izay ataon’ny tena, ka tsy azo tenenina.
Raha olona iray na roa no mitsikera, mety ho fankahalana na sangy mihoatra ny loha. Raha ny maro na ny ambanilanitra kosa no vaky vava amin’izay tsy mety atao tsy mahomby, mila mandini-tena. Ahoana ny hoe: tenenina, tsy azo; atao adala ka tezitra? Tezitra alohan’ny rariny, tsy misy hasiana ny hitsiny.
Sarobabay, izay vao aza tezitra. Tsy ho an’ny tena avokoa Ibabay sy Lohavohitra? Na sady tsy hiasa no tsy azo tenenina…